We Fight We Win. -- " More than Media ": မြန်မာ နိင်ငံသာ မှတ်ပုံတင်ကဒ် ပြား ကိုလည်း စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ဖို့လိုနေပါပြီ။
မြန်မာ နိင်ငံသာ မှတ်ပုံတင်ကဒ် ပြား ကိုလည်း စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ဖို့လိုနေပါပြီ။
( စုတ်ခြာနေတဲ့ မြန်မာ မှတ်ပုံတင်)
အရေအသွေးနုံခြာလှတဲ့ မြန်မာ မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားနဲ့ တခြားနိင်ငံတွေက မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား
အဆင့်အတန်းခြင်း ကွာခြားလှပါတယ်။ ကိုင်ရတာခြင်းကို အရသာမတူဘူး လို့အမေရိကန် မှတ်ပုံတင်ရသွားတဲ့ မြန်မာ နိင်သူ တဦး က ဆိုပါတယ်။ ထိုင်း နိင်ငံသားဖြစ်သွားတဲ့ မွန် ကလေး
ငယ် တဦး က သူရဲ့မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားကို ပြသနေပါတယ်။
နိင်ငံခြားက မှတ်ပုံတင် တွေလိုပဲ မြန်မာ မှတ်ပုံတင်ကို စနစ်တကျ ပလစ်စတိတ်ကဒ်ပြား၊
လျပ်စစ် ကုဒ် တွေကို ထည့်သွင်းဖို့ လိုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပိုအရေးကြီးတာက နိင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေးနဲ့နိင်ငံတော်က နိင်ငံသားတွေအပေါ်မှာ
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခြေအနေကတော့ နိင်ငံသားအခွင့်အရေးလဲ
မရှိ၊ နိင်ငံသားကဒ်ပြားကလဲ စုတ်ပြတ်နေတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်ငွေတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပါသလဲ။ ခရိုနီတွေ စားထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေထဲက ကဒ်ပြား
လေးတွေကိုစနစ်တကျလုပ်ပေးတယ်ဆို၇င်တောင် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်မှ မကုန်ပါဘူး။
ထူးဆန်းဖို့ ကောင်းတာကတော့ မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သားသမီး တွေ ဆွေမျိုးတွေ ၉ ၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ဟာလဲ နိင်ငံခြားသား တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ သူတို့ သားသမီးတွေ၊မြေးတွေ၊ မြစ်တွေ၊ချွေးမတွေဟာ
မြန်မာနိင်ငံသားအဖြစ် စွန့် လွှတ်လိုက်ကြပါပြီ။ မြန်မာ ဆိုတာကိုသူတို့ ဂုဏ်မယူကြပါဘူး။
if u wanna to do improve for myanmar . why u no go back to myanmar ,?
show me ur albility,just u can say .ur spit man